Izibhengezo zeNtengiso zeNtengiso kwiNtengiso yeNtengiso yeHlabathi yeHlabathi
Izibhengezo zentengiso kwizinga eliphantsi kwiNtengiso yeNtengiso yeArhente yeHlabathi yehlabathi
EyoMsintsi 06, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
i-realtyWW yindawo yokuthengisa iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba.
Ukuthengisa kunye izibhengezo zentengiso zexabiso eliphantsi kwiwebhusayithi yethu Nceda ulandele eli phepha
I ntengiso e -Le nto izisa ingeniso esisiseko neyokwenyani. Yazala iintlobo ezahlukeneyo zezisombululo zenethiwekhi, ivuselela abatyali mali kunye nabaphuhlisi. Inezikhokelo ezininzi kunye neendidi kwaye zezona ndawo ziphucukileyo kwaye zitshintsha indawo ye-Intanethi. Eli nqaku yinkcazo yendlela enye yokhokelo-izibhengezo zeentengiso zexabiso eliphantsi.
Iintengiso zezibhengezo ezikwi-Intanethi zexabiso eliphantsi yenye yeendlela ezifanelekileyo nezona ziqhelekileyo zokuthengisa kwi-Intanethi. Kuthetha ukubeka iintengiso zesibhengezo ngexabiso eliphantsi (imifanekiso yentengiso) kwiziza ekubhekiswa kuzo kwindawo yakho. Ubume beentengiso ze-banner ze-Intanethi ngexabiso eliphantsi kukuba zenza iifemu ezinkulu nezikhulu eziphakathi ngokulinganayo. Ixabiso eliphantsi (xa kuthelekiswa nentengiso kumaphephandaba nakumabonwakude) iyenza ibe yeyona ntengiso yentando yesininzi.
Zeziphi iindlela zentengiso yesibhengezo?
Isiseko ibeka intengiso yesibhengezo kuthungelwano lwebhanari. Ezi nethiwekhi zinxibelelanisa inani elikhulu leesayithi kwinethiwekhi yesikhangiso esinye, kwaye ngoncedo lweenkqubo ezizodwa zibonisa iintengiso zakho zesibhengezo kumaphepha ezi siza ezingasentla. Ukucaciswa kwezi nkonzo zahlukile. Ezinye zazo zenza uthungelwano kuphela kweziza ezityelelwe kakuhle (amakhulukhulu amatyelelo ngosuku) kwaye azivumeli iiwebhusayithi ezinomxholo ongathandabuzekiyo. Abanye bazama ukufaka amanqaku kwiindawo ezininzi abanokuziva ngazo, bezama ukugubungela abaphulaphuli abaninzi abahlukeneyo.
Unxibelelwano oluninzi lwentengiso yesitshisi lubonelela ngeendlela zokhetho ukubeka intengiso ejolise kuyo ngakumbi. Ithagethi lithuba lokubeka iintengiso zakho zesibhengezo kwiindawo ezithile, umzekelo, kunye nomxholo omnye. Oku kukunika ithuba lokuba ubonise iintengiso zakho zesibhengezo kwiqela elithile labantu ocinga ukuba bangabaxhamli bakho. Kwakhona, kukho ithuba lokubonisa izibhengezo zakho zentengiso ngexesha elithile losuku okanye kwindawo ethile (isixeko). Umgaqo-nkqubo wokujolisa kufuneka ucingwe kakuhle ukuze ufumane abathengi abaninzi kwiwebhusayithi yakho ngeendleko eziphantsi.
Enye indlela -Ukubekwa kweentengiso zakho zesibhengezo kwixabiso eliphantsi kwiindawo ezinendibano enkulu. Kuyinto esebenzayo kakhulu ukubhengeza kunye nentengiso yesibhengezo kwiinjini zokukhangela kuba abantu bayisebenzisa ukufumana ulwazi lomdla kwi-Intanethi. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokhetho ekujolise kuzo. Umzekelo, kumacandelo angumxholo okanye ubonise iintengiso zakho zesibhengezo xa umbuzo wamagama athile. Nangona iindleko zokufaka izibhengezo zentengiso ziphezulu.
Enye inketho Kukutshintshiselana ngezibhengezo zentengiso kunye nezinye iisayithi. Kodwa kule meko kuya kufuneka ubeke izibhengezo zentengiso kwindawo yakho.
Zimbini iindlela zokwenza izibhengezo zomsebenzi-"ngokucofa-kunye" kunye "nokubonakalayo." Cofa-kuxa umntu ecofa iintengiso zakho zesibhengezo kunye nokubetha kwindawo yakho. Impembelelo kuxa iintengiso zakho zesibhengezo zibonakala nje (zibonisiwe) kwiphepha. Ixabiso lokubonakaliswa lixabiso eliphantsi emva koko ucofa (ngamanye amaxesha ukuya kuthi ga kwi-100). Kodwa musa ukuthenga nje impembelelo, kuba ukuba isibhengezo asicofwanga, sisaya kubonisa!
Ingaba udinga ntoni? Apha kufuneka ucingisise ngenyameko kuyo yonke into. Ngamanye amaxesha, imigaqo-nkqubo ecingisiswe kakuhle yokujonga (uyilo lwesibhengezo kunye nomxholo) isebenza ngokukuko kunqakrazo olunye, kodwa ngamanye amaxesha iba njalo. Konke kuxhomekeke kwimeko ethile, kodwa nakweyiphi na imeko, intengiso yesibhengezo iyimfuneko ukulungiselela. Kuninzi kuxhomekeke kwintengiso zesibhengezo zodwa. Ukujonga ngokuthe ngqo kwiintengiso zebhanari, abantu bazimisele ukunqakraza kubo kwaye baye kuwe.
Iindidi zezibhengezo zentengiso
"Ngokuzenzekelayo" -ehonjiswe kakuhle kwaye kakuhle. Ngokwesiqhelo umsebenzi wabo kukukhulisa uphawu esele lukhona.
Ulwazi oluqinisekileyo-ngokuxhasa ulwazi (oluhlala lukhona).
Izibhengezo zentengiso ezinolwazi oluthile kunye nomdla. Zenzelwe ukukhangela abasebenzisi.
Iintengiso zeflagi kunye ne-HTML yesibhengezo inemisebenzi eliqela elula (isandi, imbonakalo emde yokubonisa, ukubakho konxibelelwano oluninzi ukusuka kwisibhengezo esinye). Kodwa okwangoku, banokubekwa kwinani elincinci leenkqubo zentengiso. Ukongeza, iintengiso zesibhengezo seFlash zinokungaboniswa kubasebenzisi abangafaki iplagin ekhethekileyo.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeentengiso zesibhengezo ezenzelwe ukukopela abasebenzisi. "Inkqubo" -ifana nenkqubo (i-OS yeWindows) windows. Ziyilelwe abasebenzisi be-novice. Ezinye iinkqubo zentengiso ziyakwalela ukusetyenziswa kwazo kwiinethiwekhi zazo.
Iintengiso zebhanari zinokudibanisa ezi zitayile, kodwa kwiphulo ngalinye lentengiso liyimfuneko ukwenza izibhengezo ezithile, ezenzelwe umsebenzi kunye neemeko ezithile. Kwaye nakweyiphi na imeko, izibhengezo zentengiso kufuneka zilungiselelwe ziingcali. Ngamanye amaxesha, kusebenza ngokufanelekileyo ukwenza i-animation yokutshintsha isicatshulwa (ezi zibhengezo zinolwazi oluninzi kumboniso owodwa). Ngamanye amaxesha, kungcono ukubonisa iimpahla ngoncedo lweetshathi, kwaye ngamanye amaxesha, kufuneka uze nokubhaliweyo okubhaliweyo okanye umfanekiso (usebenzisa isaykholoji).
Kufuneka usoloko uzama ukukhuthaza into ethile, umntu ngamnye. Kunzima ukuba nomdla umntu ngemveliso okanye ngenkonzo ukuba uyapapashwa (kwaye uqhubeke nokukhuthaza) ngabaninzi abanye. Umkhankaso wentengiso kufuneka uthathe phantsi kwento ethile eyahlulahlula wena. Umzekelo, inkqubo yesaphulelo, iinkonzo ezongeziweyo, izibonelelo, amabhaso e-lottery, njl.nokuba awunayo loo manyathelo okanye iinkonzo, unokuhlala uza neyona ndlela ifanelekileyo yokufakela imveliso okanye inkonzo.
Iintengiso zebhanari zinenye into-ziyafa! Hayi, akufuneki ukuba bangcwatywe, kodwa kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuguga kunye nokufa kweentengiso zesibhengezo. Bafa njani? Masithi ubeke iintengiso zakho zesibhengezo ngexabiso eliphantsi kuhlobo oluthile lwenethiwekhi olunezinto ezininzi ezibonakalayo. Kodwa, emva kwethuba, iindwendwe ezifanayo ziyaqala ukuyibona okwesibini kunye neyesithathu. Ukusebenza kakuhle kunye nokushicilelwa kuyawa - iintengiso zesibhengezo ziyafa. Kwaye ukuba iintengiso zesibhengezo zixhonywa ixesha elide ngokwaneleyo, bayayeka ukuqaphela iindwendwe (kwaye uhlawula imali yendawo yabo!). Kungangcono ukuba ubeka nje enye intengiso yesibhengezo.
Abanye abaqulunqi banikezela ngesisombululo esinye sayo yonke intengiso yesibhengezo (isitayela ngokubanzi). Kodwa kutheni? Isikhangiso ngasinye sesibhengezo kufuneka sahluke kwaye siphile ubomi bakhe. Akukho mfuneko "yokulahla" iintengiso zesibhengezo ezichithwa. Banokuhlala befakwa kwi-imeyile ngembalelwano yeshishini okanye kwiindawo ezikwiindawo ezinobuhlobo zabahlobo bakho okanye amaqabane. Kwaye banokubekwa kwisakhelo esihle ngaphezulu kwetafile eofisini. Ngaba unokuyithelekelela into obu buhle - ukuxhonywa, ukuqhwanyaza ... ndiyadlala, kunjalo… 🙂
Izibhengezo zentengiso yearhente
3.6 (71.43%) 7 iivoti
okwenyaniWW Septemba 6, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Inethiwekhi yesibhengezo sentengiso, Isibhengezo sentengiso, Isibhengezo sentengiso eshibhile, Iibhanki Zentengiso, Intengiso yeWebhu, Isibhengezo sentengiso, Inethiwekhi yesiBhengezo seNtengiso, Izibhengezo zentengiso zenethiwekhi, Izibhengezo zeBhanner, Inethiwekhi yeNtengiso yeNtengiso, Inethiwekhi yokuBhengeza intengiso, Izibhengezo zentengiso yesibhengezo, Isibhengezo esingabizi, Isibhengezo ngexabiso eliphantsi, Intengiso yesibhengezo, Intengiso yeNethiwekhi yeBhanari, Izitshisi ezibizi, Izitshisi zexabiso eliphantsi, Izitshisi kwiTV, Izitshisi kwiTV, IBannerson yexabiso eliphantsi, Bannersonthecheap, Eyona Ntanethi yesiBhengezo seNtengiso, Isibhengezo sentengiso eshibhileyo, IziBhengezo zeNtengiso eziPhantsi, Isibhengezo eshibhile, Iintengiso zebhanile ezishibhile, Intengiso yeBhanile engabizi, Inethiwekhi yokuThengisa iiBhanari ezingabizi kakhulu, Isibhengezo sendawo yokuthengisa izindlu nomhlaba, Izibhengezo zentengiso yearhente, Intengiso yeBhanile yeZindlu, IziBhengezo zentengiso yearhente, Iibhena zewebhusayithi zokuthengiswa kwezindlu, Isibhengezo sendawo yokuthengisa izindlu nomhlaba, Iibhena zewebhusayithi zokuthengiswa kwezindlu, UkuBekisa iiBanners, Izibhengezo zeNtengiso yeWebhu, Intengiso yeBhanti yeWebhu, Izitshisi zewebhu. Bookmark le Permalink.